Bilayska Gaalkacyo oo la kordhiyay - Sabahionline.com
Bilayska Gaalkacyo oo la kordhiyay
Ciidamada bilayska gobolka ayaa Isniintii habeenkeeda (2-dii Juulaay) ciidamo ammaan oo dheeraad ah keenay koonfurta Gaalkacyo ee uu ka taliyo maamulka Galmudug, taasoo jawaab u ah warar sheegaya in kooxo qowlaysato ah oo hubaysani ay magaalada soo galeen, sida uu sheegay taliyaha bilayska aaggaas Maxamed Nuur Cali.
5 qof oo rayid ah oo ku dhaawacmay bam-gacmeed lagu tuuray xaflad aroos oo Muqdisho ka dhacday
3 bilays ah oo la dilay iyo maxaabiis ka baxsatay xabsi ku yaal Somaliland
Wasiirrada Soomaaliya oo qabtay kulan gaar ah oo ku saabsan jid-gooyooyinka sharci-darrada ah
Ciidamada ammaanka Soomaaliya oo Muqdisho ku xiray xubno looga shakiyay al-Shabaab
Cali waxa uu war-fidiyeenka u sheegay in bilaysku la iman doonaan wax walba oo suura-gal ah sidii ay gobolka uga ilaalin lahaayeen falalka dambiilenimo, sidaana waxa sheegay Radio Bar-Kulan-ka ay maal-galiso Qaramaada Midoobaay. Waxa uu ku boorriyay dadka degaanka in ay taxaddar muujiyaan oo ay bilayska ku soo war-galiyaan wixii xog ah ee ku saabsan falal qowlaysato-nimo. Xaaladda ammaan ee kor loo qaaday ayaa timid kadib dilkii Isniintii loo gaystay taliye-ku-xigeenkii bilayska Puntland Gaashaannle Sare Cabduullaahi Saalax Nadaalo oo ay rag hubaysani ku dileen Garoowe. Bilayska iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa bilaabay baaritaan ay ku daba-joogaan kuwii dilka gaystay, laakiin illaa iyo hadda cidna lama soo xirin, sida uu sheegay Rado RBC.
Nadaalo ayaa ahaa xubin aad loogu yaqaan waaxda la dagaallanaka burcad-badeednimada ee ciidamada bilayska Puntland.